Isithuba esiphantsi kwekhibhodi ye-iPhone X sivelisa izikhalazo ezininzi | IPhone iindaba
I-iPhone X sisiphelo esingafanelekanga kuye wonke umntu, njengoko besesitshilo kuphononongo, Kuya kufuneka ucace gca ukuba ujongene nesixhobo ekunokwenzeka ukuba siphula zonke izinto ezibunjiweyo esekwe ukuza kuthi ga ngoku, ke iya kuba yinto ephazamisayo kuthi ukuba izinto ezithile zeyona fowuni yanamhlanje isebenza njani kwinkampani yeCupertino.
Omnye wabasebenzisi abanomsindo omkhulu yindawo elahlekileyo yefowuni (ayisetyenziswanga) ngezantsi kwekhibhodi. Uninzi lwabasebenzisi abanezakhono banemibono emnandi yokufumana lo mngxunya ulahlekileyo kwaye bawenze ube luncedo ...
Ababhali beendaba ezinkulu banika umbono wabo wokuqala malunga nokusilela okungathandekiyo kokudityaniswa, nangona kunjalo, apha kwi-iPhone News besingayekanga ukuhlalutya ngokweenkcukacha le nkcukacha izisa uninzi kwiintloko zabo kwaye ayibalulekanga kangako kwabanye, into efana naleyo Kwenzeka ntoni ngokuhamba kancinci phezulu apho ikhamera yangaphambili kunye neenzwa ze-ID zobuso zikhona. Yenye yezo zinto zinokubangela ukuba uyithande okanye uyithiye ngokupheleleyo de ibe yinkathazo yokwenene.
Abasebenzisi bathanda UAlex Muench Kwi-Twitter njengo @alexmuench babelane ngeminikelo emikhulu malunga nokuba iApple kufuneka (okanye ukuba ifuna ukwenza) ngayo yonke indawo elahlekileyo. Inyani yile yokuba ezona zicelo sizisebenzisayo zihlala zinokusetyenziswa kwekhibhodi, okanye ziyifuna ngamanye amaxesha, yiyo loo nto inyanzelekile ukuba ikhibhodi isebenze kwaye idibanise ngokugqibeleleyo kubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, le ikhibhodi ngokuchanekileyo isoftware ngakumbi ngasemva ngu-Apple kuhlelo lwamva nje lwe-iOS. Asithandabuzi ukuba kancinci kancinci unokuyila into eyenza ukuba esi sithuba sibe luncedo, nangona sithathela ingqalelo isenzo sophuma esiya kwiNtwasahlobo ndiyabona ukuba kunzima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Isithuba esiphantsi kwekhibhodi ye-iPhone X sivelisa izikhalazo ezininzi
UOscar J. sitsho
Enye into encinci evela kuApple.
Umzekelo, kukhetho lweesetingi zonke ziboniswa kwiscreen sonke kwaye oko akukuthinteli ukwenza umqondiso wokushiya iBhodi yeNtloko ngaphandle kokwenza umgca wokugqibela.Andiqondi ukuba kutheni beshiye indawo enkulu kangaka phantsi kwekhibhodi.
Zininzi izinto zokupholisha okwangoku ukusuka kwi-iOS 11 kwi-iPhone X.
Phendula uOscar J.
Isithethi esiphambili se-iPhone X sivelisa imisindo ephezulu